HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 29-JUNE-2020
Monday June 29, 2020 - 11:13:05 in Wararka by Mogadishu Times
Q/ Midoobay iyo Midowga Yurub oo war kasoo saartay hadalkii gudoomiye Xalii mo Yareey. Q/Midoobey ayaa muujisay sida ay ugu fa raxsan tahay hannaanka doorasho oo ay soo bandhigeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo ay hogaamineyso Xal
Q/ Midoobay iyo Midowga Yurub oo war kasoo saartay hadalkii gudoomiye Xalii mo Yareey. Q/Midoobey ayaa muujisay sida ay ugu fa raxsan tahay hannaanka doorasho oo ay soo bandhigeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo ay hogaamineyso Xal iimo Yareey, waana hannaan la gu gaarayo doorashada tooska ah ee Soomaaliya ilaa bilowga bisha Maarso ee sanadka soo aaddan. UN-ka waxey dhinacyada Soomaalida ku boorisay in la yeesho wada tashi dhexmara hogaamiyayaasha siyaasadda si loo tiigsado wadar-oggol, sidii horay loogu sii dhaqaaqi lahaa iyo shirka la filayo inuu dhexmaro dowl adda Federaalka iyo maamul goboleedyada. Dhanka kale Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa ugu ha mbalyeeyay G/Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaran, isagoo ku adkeeyay baahida loo qabo is afgarad siyaasadeed oo ku saleysan mabaa'diida la isku raacay in la furo saaxada siyaasadda, laga soo bilaabo min xulasho illaa doorasho, iyo doorashada waqtigeeda. Hadalkaan ayaa ku soo aadaya xilli Gudd oomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee doo rashooyinka Qaran Xaliima Ismaaciil Ibraah im (Xaliima Yarey) ay Dorraad Baarlamaanka ka hor-jeedisay warbixinta doorashada 2020 /21, kaasoo ahaa mid la wada sugayay. Guddoomiye Xaliima Yarey ayaa caddey say in doorashada habka diiwaan gelinta ay ku dhici karto muddo 13 bilood gudahood la ga bilaabo bisha July 2020 illaa bisha Ago sto 2021. Waxaa ay sheegtay doorashada nooca dii waan gelinta aysan ku qabsoomi karin bisha November ee sanadkan oo ah xilliga Baarla maanka waqtigiisa dhamaanayo, Sidoo kale waxaa ay xustay in doorashada ku dhaceysa hab diiwaan gelinta ay ku dhici karto illaa bisha Agosto 2021.
Prof.Cali Maxamed Geedi oo warbixin cajiib ah ka qoray xaqsiinta gobolka Banadir
R/wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cali Maxamed Geeddi oo warbixin qoraal ah soo saaray ayaa si qoto dheer uga hadlay ansix intii xeerka mataladda G/Banaadir,isaga oo u mahadceliyey Xildhibanada G/Shacabka .
Md.Geeddi ayaa go’aanka baarlamaanka So omaaliya ku tilmaamay inuu yahay mid baal dahab ah ka galay taariikhda gobolka Bana adir iyo guud ahaan Qaranka.
Sidoo kale wuxuu boggaadiyey doorkii madaxweynaha Somaaliya ee ku aaddanaa xaqsiinta G/Banaadir.R/wasaari hii hore ay aa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in xil dhibaanada 2 da Aqal ee baarlamaanka lo oga fadhiyo dhameystirka maqaamka caas imadda Muqdisho.Halkan hoose ka aqriso:
Golaha Shacabka BFS wuxuu u codeey ey,aqlabiyad buuxdana ku meel mariyey sha rciga matalaadda siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ee G/Banaadir. Waa go’aan baal dahab ka galay taariikhda Gobolka iyo guud ahaan Qaranka Soomaaliyeed. Waa tallaab geesinimo leh ee uu qaaday G/Shac abka BFS uguna hiilliyey muwaadiniintiisa xaqooda dastuuriga ah laga curyaaminayey muddada dheer..
Shacabka sharafta leh ee G/ Banaadir iyo Gobollada kaleba waxaa iyagana laga rabaa in ay taageeraan G/Shacabka kana difaaca an ciddii isku dayda inay wiiqdo geeddi soc odka sharciga iyo hannaanka doorashooyin ka dalka ee qof iyo cod ee hoggaaminayo Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyin ka Qaranka, loogana gudbayo doorasho da dban iyo in masiir ama xaq-siyaasadeed mu waadin uu ku sii jiro gacan shakhsi kale, dar ajada uu rabo ha lahaadee.
Allaha awoodda leh ka dib, waxaa mahad daas iska leh G/Shacabka BFS oo Dorraad ansixiyey 13 xubnood ee shacabka G/ Ban aadir ku matali doona Aqalka Sare ee BFS.
Si ka sarreysa, qaddarin iyo mahadcelin aan la koobi karin waxaa leh Madaxweyne Max amed C/hi Farmaajo oo furitaankii kalfadhigii 7aad ee BFS (06.06.2020) uga dhawaaqay hindisaha matalaadda shacabka G/Banaad ir,si qiiro lehna uga codsaday inuu ku xurm eeyo kana aqbalo, taasoo G/ Shacabka BFS uu hoosta la xarriiqay fuliyeyna. Madaxwey ne Farmaajo oo gudanaya waajibkiisa dastu uriga ah, kana jawaabaya rabitaanka dadkii sa, ayaa u bareeray oo dhigay sumad ama ri koodh (record) ay dhigi waayeen Madaxwey neyaashii ka horreeyey.
Ugu dambayntii, shacabka Banaadir iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba wa xay baarlamaanka uga fadhiyaan dhamayst irka maqaamka caasimadda Muqdisho oo ah gool kale oo dhalintiisa laga sugayo Gol eyaasha Qaranka iyo Madaxweynaha JFS.
Madasha Xisbiyada oo dalbaday inay is-casilaan guddiga doorashooyinka
Madasha Xisbiyada Qaran ee Soomaali ya ayaa ku baaqay inay is-casilaan dhamma an xubnaha guddiga madax-banaan ee doo rashooyinka qaranka Xaliimo Yarey, ka dib markii ay sida ay sheegeen ay ku fashilantay shaqadii loo igmaday.
Qoraal kasoo baxay Madasha ayaa lagu yiri "Madasha Xisbi yada Qaran waxay caddeyneysaa in ha dal-jeedintii Gu ddi ga 27/06/2020 gola ha shacabka ee ah aa ineysan qaban karin door asho waqtigee da ku dhacda uu xambaars anaa kaliya had afkii muddo kororsiga ahaa ee GMDQ iyo Hoggaanka dalku kawada shaqeynayeen muddooyinkii dambe oo ay Madashu dhawrj eer ka digtey.” Madasha waxay sheegtay in guddiga doorashada ay san ahayn dhexdhe xaad Madax bannaan si da dastuurku siiyay ayna ku milmeen hog gaanka dalka kalana shaqeynayaan muddo dheereysi ka baxsan dastuurka iyo sharciga doorashoyinka dalka.
War-saxaafadeedka ay soo saareen Mada sha Xisbiyada Qaran waxey guddiga mada xa bannaan ee doorashooyinka ugu baaqe en iney is casilaan, tiiyoo ay jirto inaan gabi ahaan lagu soo hadal qaadin go’aankii ay Baarlamaanka ku ansixiyeen matalaadda G/Banaadir. "Madashu waxey ku baaqeysaa in Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashoo yinku dhamaantood is casilaan mar hadii ay lumiyeen kalsoonidii shacabka iyo saamile yda siyaasadeed ayna caddaatey iney ku mil meen hoggaanka dalka isla markaana ku fa shilmeen qabashada doorasho qof iyo cod ah kuna dhacda waqtigeeda dastuuriga ah,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Madasha ayaa sidoo kale sheegtay inay san marnaba aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo hay’adaha dowladda.
"MXQ ku wargalineysaa hoggaanka dawl adda, dhammaan umadda Soomaaliyeed iyo cidkasta oo daneysa geeddi socodka siyaas adda Soomaaliyeed inaan la aqbali karin muddo dheereysi aan sharci ahayn. Sidaasi darteed, waxii dhibaato ah ama dib udhac ah ee dalka kasoo gaara ka tallaabsiga dast uurka dalka iyo isku dhajinta kursiga waxaa masuuliyaddeeda qaadi doona hoggaanka dalka,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Madaxweynihii Hore ee Soomaaliya Md. Xasan Sh.Maxamuud oo Shalay Warbaah inta kula hadlayay muqdisho ayaa ka hadlay go’aankii Xildhibaannada G/Shacabka ku ansixiyeen 13 Kursi oo G/ Banaadir uu ka helayo Aqalka Sare iyo hadalkii G/Guddiga Madaxa ban naan ee doorashooyinka Qaranka.
Md.Xasan Sh. ayaa soo dhaweeyay mat aalada G/Banaadir Aqalka Sare, isaga oo sheegay inay tahay tallaabo horay loo qaad ay,waxaana uu u mahad celiyay Xildhibaann ada Golaha Shacbaka ee ansixiyay.
Sidoo kale Md.Xasan Sheekh ayaa ka ha dlay hadalkii GuddoomiyahaDoorashooyinka ay ku sheegtay in loo baahan yahay muddo 13 Bilood ah si doorasho loo qabto,waxaana uu sheegay in haalkaasi uu yahay Muddo kordhin riman muddo kordhin kale.
Hadalka Madaxweynihii Hore ee Sooma aliya Xasan Sh.Maxamuud ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli qaar kamid ah hoggaa miyeyaasha Mucaaradka ay kasoo hojeest een hadalkii Guddoomiye Xaliimo yareey hal ka kuwo kale ay ka aamusan yihiin.
QM oo ka hadashay Warbixintii Guddiga Doorashooyinka Qaranka.
Xafiiska QM/Soomaaliya ayaa War kasoo saaray hadalkii kasoo yeeray G/Guddiga Ma daxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yareey oo ay ku shaacisay nooca Doorasho ay dalka ka dha ceysa 2020/2021. Qoraal kasoo baxay QM ayaa waxaa loogu mahadceliyay Guddoomi ye Xaliimo Yareey oo soo Dorraad soo bandh igtay noocyada farsmo ee lagu gaari karo ku guuleysiga doorasho toos ah oo Soomaaliya ka dhacda horraanta Maarso 2021.
Qoraalka ayaa waxaa kale oo lagu sheeg ay in QM ay Madaxda DFS & Dowlad Gobo leedyada dalka ku boorrinayso inay yeesha an wadatashi ballaaran, si loo gaaro Isfahan.
"QM ee Soomaaliya waxaay ugu mahad cel ineysaa G/G/Doorashooyinka Qaranka, Xali imo Ismaaciil, soo bandhigidda noocyada fa rsmo ee lagu gaari karo ku guuleysiga door asho toos ah oo Soomaaliya ka dhacda horr aanta Maarso 2021, QM ee Soomaaliya wa xa ay boorrinaysaa wadatashi ballaaran oo ay yeeshaan hoggaamiyeyaasha siyaasad da Soomaaliya si loo gaaro Isfahan, si hore loogu sii socdo – kulanka qorsheysan ee DF& Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka waa tallaabo yididiilo leh oo xigta.” ayaa lagu yiri Qoraalka QM.
G/G/Madaxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Yareey ayaa G/Sh ka hor cadeysay in hirgalinta doorashada qof iyo codka ah aysan ku dhici karin xilligii loogu tal agalay loona baahan 13 bilood oo ka bilaab aneysa bisha Julaayo 2020 kuna egtahay Agoosto 2021.
Wasiirka Amniga Jubbaland oo lagu ee deeyay inay Askartiisu hub ka iibinaya an Dadka Mandheera. Md.Cumar Maxamed Macallin Mudanaha laga soo doortay Bariga Mandheera oo Wa rbaahinta la hadlay waxa uu qalqal gelin ku eedeeyay inay sameynayaan askarta uu wa to Wasiirka Amniga D/G/J.
Waxa uu sheegay in beelo badan ay degen yihiin ism aamulka oo marar badan is ku dhac dhexma ray, sidaas awgeed ay suuragal tahay inay hubka ka iib sadaan ilaalada Wasiir Janan di bna uga ad eegsadaan dagaalka dhexdooda.
Md.Cumar ayaa soo jeediyay inay Ismaa mulka Mandheera laga saaro Wasiirka Amn iga D/G/Jubbaland Cabdirashiid Xasan Ca bdinuur Janan iyo Askarta la socoto oo gar ab ka helaya Dowladda Kenya.
Sababta go’aankaas ay usoo saareen waxa uu ku tilmaamay inay ku ilaalinayaan nabadgalyada Magaalada iyo deegaannada kale ee xeeran, kagana fogaanayaan isku dhacyada beelaha walaalaha ah.
Dhawaan Askarta Wasiir Janan waxaa la gu eedeeyay inay dhac iyo kufsi ka geysteen M/Mandheera, inkasta oo aan jirin war ka soo baxay dhanka Cabdirashiid Janan oo uu kaga hadlayo eedeyntaas.
Laammaha ammaanka Kenya waxa ay si cad u sheegeen inay hayaan shaqsiyaad hu bka ka iibinayay dadka deegaanka, walow aysan tilmaamin in hubkaas ay ku lug leeyihi in Askarta Wasiirka Amniga Jubbaland&in kale.
Baarlamaanka Puntland oo si adag uga dooday Metelaadda Gobolka Banaadir
Kulan ay Shalay M/Garoowe ee G/ Nuga al ku yeesheen Xildhibaannada G/wakiilada Puntland ayaa waxaa ay si adag uga hadle en Go’aankii Xildhibaanna da G/Shacab ka ugu ans ixiyeen G/Banaadir in uu matalaad ku yeesho Aqal ka Sare.
Inta uu kulanka socday ayaa Xu bno kam id ah G/ Wakiilada Puntland waxaa ay DFS, Mada sha Xisbiyada, maamulla da HirShabee lle, KGS iyo Galmudug ku eedeeyey inay faquu qayaan Puntland iyo Jubbaland. Warar kale oo laga helay kulanka ayaa wa xaa ay she egayaan in Xildhibaannada qaar ay soo jee diyeen in Puntland ka tashato So omaaliya isla markaana ku dhawaaqdo ma dax-ban naani, waa sida ay hadalka u dhig eene. War arka ay xaqiijiyeen ilo lagu kals oonaan karo ayaa waxaa ay sheegayaan in G/Waki ilada Puntland iyo Xukuumadda Ma amul kaas ay qaraar kasoo saari doonaan sa ara yo metel aadda gobolka Banaadir.
Habeenkii 26-ka June ee Muqdisho looga da baal dagayey xornimadii Gobollada waqooyi ee Soomaaliya 60-sano kahor, ayaa rasaas tii la adeeg saday da baa-deg gan waxaa ku dhaawacday dad shacab ah. Inta la xaqiij iy ay ilaa 10-qofood ayey dha awacyo kala du wan kasoo gaareen rasaastii habeenka as lo ogu dabaal dagay ay xu ska 60-guura dii xor nimada Go bolada Waqoo yi, waxaana jirta warb ixin laga soo aruuriyay xa rumaha caafimaad ka magaa lada.
Isbitaalada Mad iina iyo Darul Shifa ayaa laga soo xigt ay in wadar ahaan 8 qofood loo keenay oo ay ku jireen canug yar iyo hooyo da’ ah, si doo kalana taliska booliska ayaa qirtay in ra saasta la riday ay waxyeelo badan geysatay.
Dadka ugu badani waxey qabaan in ras aastaas ay rideen ciidamada dowladda, bal se waxaa la ogyahay in hubka cid walba gac anta ugu jiro, islamarkaana aan la xaqiijin ka rin gacanta rasmiga ah ee dhibaatada geysa tay. "Dowladda waxaan ka codsaneynaa in dowladda ay xuska 1-da Luulyo aan la ridin xabado isla markaana la adeegsado bulale er,” ayaa laga soo xigtay qof ka tirsan ehelka hooyo waayeel ah oo ay waxyeelo kasoo ga artay rasaastii la riday.
Casiisa Shiekh Cali ayaa lagu sheegay magaca hooyada ay dhibaatada soo gaartay waa 85-jir, waxeyna ku jirtaa xaalad culus maadaama ay xabadu kaga dhacday meel halis ah. Xigasho:-Geesguud.com.
2 eedeysane oo la horkeenay Maxkamad da Ciidamada
Maxkamadda CQS Qaybta 27aad oo u far isatay wejiga 1aad ee dacwaddii loo heystay 2 eedeysane oo mid kamida uu yahay shac ab halka kan kalane ka tirsan yahay CXDS.
2da eedeysane oo kala ah Dable Xoogga Cabdi Cabdulle Jaliil iyo Shac ab Ibraahim Maxa mud ayaa loo hey staa lunsa sho dhuunta qoriga dha shiikaha ee ay ku hawlgeli jireen Ururka 40a ad, Gudada 5aad ee Qaybta 27aad ee CXD.
Dhageysiga Fadhiga maxkamada waxaa daahfuray Gudoomiyaha Maxkamadda CQS ee Qaybta 27aad, Gaashanle Maxamed Ami in Cabdulle Aadan,
Kuxigeenka Xeer Ilaaaliyaha Guud ee Max kamadda CQS iyo Qareenkii difaacaya ay aa dhankooda intii dacwadda socotay dood dheer dhex martay.
Abuukaate Carab Yuusuf Nuur Shabeel oo ah qareenkii u doodayay eedeysaneyaasha ayaa Maxkamadda ka codsaday in eedeysa nayaasha loo firiyo sifaalaha dambiga fudud eeya. Xeer Ilaaliye Kuxigeenka Maxkamada CQS,G/le Maxamed C/dir Maxamed ayaa ga rsoorka ka hor cadeeyay in eedeysaneyaa sha ay isku dayen inay lunsadaan hantida CXD.
Xeer Ilaaliyaha ayaa sidoo kale Garsoorka ka codsaday in 2dasi eedeysane la marsiiyo ciqaab adag, si ay tusaale ugu noqoto askar ta iyo Saraakiisha kale ee C/Q/Sida.
Garsoorka Maxkamadda ayaa sheegay in isugu imaan doono kulan kale oo horey loo gu sii amba qaadi doono doodda iyo dacwad da la xiriirta labada eedeysane.
Dowladda Libiya oo soo dhaweysay Mo wqifkii Soomaaliya ee Shirkii dalalka Carabta.
Maxamed Al-daahir Siyaalad W/Arrimaha Dibedda ee D/Libya ee GNA ee ay QM aqo onsan tahay, waxa uu Khadka Telefoonka ku la hadlay Dhigiisa So malia,Axmed Ciise Cawad oo uu uga mahad celiyey Mowqifkii ay Somaliya ka istaagtay Mashruucii Qaraarka ee laga soo saaray Shi rkii W/Arrimaha Dib edda ee dalalka Carabta Khadka Internet-ka ku yeesheen maalintii Talaadadii la soo dha afay.
Qoraal la soo dhigay Barta Facebook-ga ee W/Arrimaha Dibedda ee D/Libiya waxaa lagu xusay inuu W/Arr/D/Libiya, Maxamed Al-daahir Siyaalat uga mahad celiyey Dowl adda&Shacabka Somaliya taageeradda D/Li biya ee Shirkii Degdegga ahaa ee Ururka Ja amacadda Carabta ka yeesheen Xaallada dalka Libiya.
2da Wasiir Arrimo-Dibadeed ee Somalia & Libiya waxay kaloo Khadka Telefoonka kaga arrinsadeen Horumaradii ugu dambeey ey ee Xaalladaha Somaliya iyo Libiya iyo si da loogu baahan yahay in la sii wado xiriirka 2da dal iyo Danaha Guud ee 2da Shacbi iyo Iskaashiga La-dagaalanka COVID 19 ee He erka 2da dal ama Heerka Dowladaha xubna ha ka ah Ururka Midowga Afrika.
Wargeyska Alwasad ee ka soo baxa M/Trip oli waxa uu qoray inay Somaliya ka mid aha yd 3-dii Waddan ee ka soo horjees tay qaar ka mid ah 14-kii qoddob ee Bayaan kii Mash ruuca Qaraarka ee ay W/Arri/Dibedda ee dalalka Carbeed ka soo saareen Xaall adda dalka Libiya.
Dhanka kale Wargeyska waxa uu tilmaam ay inay Somaliya,Qatar&unisia laaleen Qar aarkaasi,kuna baaqay in la dhowro Midnim ada iyo Deganaanshaha Libiya, iyadoo ay Somaliya ka biyo-diiday Qoddobadda 7-aad, 8-aad iyo 11-aad ee Bayaanka Carbe ed ee laga soo saaray Arimaha dalka Libiya.
Puntland oo lagu wareejiyay Deeq Daawo ah
W/Caafimaadka Puntland ayaa Shalay ka la wareegtay hay’adda UNICEF qalab loogu talagalay 12 xarumood oo hooyada &dhala anka oo dib u dayactir lagu sameeyay,xarumahaan ayaa ku kala yaala gobolada Nu gaal &Mudug.Md.Xaashi Xir si Muuse oo ka socday hay’ adda UNICEF oo qalabaka wareejinayay ay aa sheegay in Shalay ay wasaaradda ku wa reejinayaan qalab loogu talagalay 12 xa rum aha hooyada iyo dhalaanka ah oo la day acti ray,xarumahan ayaa lagu dayactiray dhaqaa le ay bixisay wadanka Germalka wax aana la soo mariyay UNICEF, xarumaahaan ayaa ku kala yaala meelaha fog ee gobolada Nug aal & Mudug.Dr.Abdirisaaq Xirsi Xasan Aga asimaha guud ee W/Caafimaadka Puntland oo hadal kooban ka jeediyay ayaa ugu horayn soo dhaweeyay qalabkan Shalay ay kala waree gayaan hay’adda UNICEF loogu na talagalay ilaa 12 xarumood oo hooyada & dhalaanka ah oo ku kala yaala deegaanada fogfog ee Puntland.
Waxa uu xusay in xarumaha la dayactiray 5 kamid ah ay ku yaalaan gobolka nugaal k uwaas oo kala ah xarunta hooyada dhallaan ka Badey degmada Eyl, Yoonbeys, Gamb ool, Gargaar iyo Kulmiye degmada Burtinle.
Sidoo kale gobolka Mudug 7 xarumood oo hooyada iyo dhalaanka ah ayaa la dayac tiray qalabkaana la gaarsiin doonaa kuwaas oo kala ah degmada Jiriiban ( Garcad iyo Ba libusle), Degmada Galdogob (Shaafici iyo Qudus), xarun ku taala Buursalax iyo xarun hooyada iyo dhalaanka oo laga dhisay degm ada Tawfiiq oo aan horay ulahayn.
Agaasimaha ayaa xusay in qalabkaan ay iskugu jiraan kii ilmaha xabka looga keenay ay marka uu dhasho, sariirihii hooyada ay ku umulaysay iyo Oxygentii ilamaha hadii uu u baahado lagu qabanayay, waxaana uu fud udayn doonaa dhimashada hooyada iyo dhallaanka.
Wasiirka W/Caafimaadka Puntland Dr Jaamac Faarax Xasan oo ka hadlay qalab wareejinta ayaa sheegay inu ugu horayn ku faraxsanyahay in shaqadii soo socotay ee dhaqaalaha ay bixinaysay dalka Germalka ayna fududeynaysay hay’adda UNICEF ay soo dhamaatay dayactirkii xarumaha manta na qalabkii loogu talagalay ay kala wareeg ayaan hay’adda.
Wasiirka ayaa sheegay in mashruucaan oo 3 waji ahaa uu soo dhamaaday wajigii 1aad oo ahaa dayactirka 12 xarumood hooy ada iyo dhalaanka oo ku yaalay meelaha fog fog kuwaasi oo ay ku badnayd dhimashada hooyada iyo dhalaanka baahi badana uqab ay inay helaan xarumahan oo casri ah una dhamaystiranyihiin intii badnayd qalabkii loo ga baahnaa, taasina xogtii ugu danbeysay ay cadaynayso in 50% ay hoos udhacday taasina ay tahay hadafkii ugu weynaa ee wasaaradda ay ahayd inay gaarto.
Wasiirka ayaa sheegay in wajiga 2aad uu bilaaban doono kaasi oo lagu dayactirayo cisbitaalada degmooyinka Bacaadweyn, Gal dogob iyo Burtinle, wajiga saddexaadna wa xa lagu dhisi doonaa cisbitaalka M/ Garo we oo ay ahayd in waqti hore la bilaabo ba lse dib udhaca uu keenay xanuunka safmar ka ah ee Covid 19, dhakhsana uu rajaynayo in uu ubilawdo.Wasiirka ayaa ugu danbeyn u mahad celiyay wadanka Germalka iyo hay’a dda UNICEF shaqada ay qabatay uuna she egay inay tahay sxbka ugu weyn ee ay lee dahay.
Golaha Wakiilada Somaliland oo Ansixi yay Xubno lagu daray Guddiga doorashooyinka.
Kulan ay Shalay M/Hargeysa ku yeeshe en xubnaha G/Wakiilada Soomaliland aya waxaa ay ku ansixiyeen 2da xubnood ee xis biyada Waddani iyo UCID u soo magacawd een guddiga Doorashooyinka Somaliland. 2dan Xubnood ay aa horay waxaa u diiday Golah a,waxaana khilaaf ka dhashay uu arrintaasi sameyn ballaaran ku yeeshay Shaqada X/Soomaaliland iyo Xisbiyada muc aar adka walow markii dambe laga heshiyay G/G/Wakiilada Soomaliland Baashe Max amed Faarax ayaa Golaha ka hor Cadeeyay in Xubnahaani ay saxeen wixii hore loogu ha ystay ee keentay in la diido.
49 Xildhibaan ayaa ansixiyay Cabdifataax ibraahim Xasan oo ka socday xisbiga UCID halka Maxamuud Siciid Sh.Dalmar oo ka soc day Xisbiha WADANI ay u codeeyeen 51 Xil dhibaan hal Xildhibaan ayaana ka aamusay.
G/G/W/Soomaliland Baashe Maxamed Faar ax ayaa sheegay in 2daan Xubnood la ansi xiyay,isla markaana ay sirasmi ah uga mid yi hiin Guddiga doorashooyinka Soomaaliland.
Kumaandooska Danab oo Shabaab kala wareegay deegaano hor leh
Ciidanka Kumaandooska DFS ee DAN AB,ayaa lagu soo warramayaa inay Al-sha baab kala wareegeen degaanno horleh oo ka tirsan G/J/Hoose. Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay, ayaa laga soo xigtay in Ci idamada ay la wareegeen degaannada kala ah, Janaay Cabdale, Helishiid, Mayonde iyo Garasceebe oo dhammaantood ka tirsan G/Jubada Hoose.
Taliyaha Guutada 16-aad kumaandooska DANAB G/le Ismaaciil Cabdimaalik Maalin, ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwa sii socda,isla markaana aysan joogsan doon in ilaa iyo inta Al-Shabaab ay ka saarayaan degaannada Jubbooyinka.
Inkastoo Shabaab laga qabsaday deegaa no kala duwan haddana wali waxa ay leeyihi in awooda dagaal ay kula galaan Ciidamada kala duwan ee DFS Awooda ugu badan ee Kooxda waxa ay isugu tagtay G/Jubbada Dhexe, halkaasi oo saraakiisha ugu sareysa Al Shabaab ay ku sugan yihiin.
Ciidamada Danab ayaa muddooyinkii da mbe dhaq dhaqaaqyo ciidan oo kala duwan waxa ay ka wadeen deegaano & Degnooyin ka tirsan Gobolada Jubbooyinka.
Qaar ka mid ah ciidamada Itoobiya oo ka baxay gudaha Soomaaliya
Qaar ka mid ah ciidamada milatariga dal ka Itoobiya ee qeybta ka ah howl-galka AMI SOM ayaa isaga baxa gudaha dalka,ka dib markii ay dhameysteen mudo howleedkooda Ururka M/Afri ka ee Soomaaliya.
Ciidamada dib ugu laabtay dalka Itoobiya ayaa munaasabad soo dhow eyn ah loogu sa meeyey G/Liibaan ee D/dee gaanka Soo maalida, iyadoona lagu xareey ey xero ciid an oo ay wasaaradda gaashaa ndhigga Itoo biya ay ku leedahay halkaasi.
Sidoo kale guutadaan ka baxday Sooma aliya ayaa waxaa lagu magacaabaa Qilfat, waxaana ay ka howlgaleysay gobollada Ba ay iyo Bakool ee k/ta Soomaaliya.
Ciidamadan ayaa safar dhulka ah uga bax ay K/Galbeed, iyaga oo ku gaaray gaaray da lka Itoobiya, gaar ahaan xeryaha loogu tal agalay. Itoobiyaha ayaa qeyb ka ah dalalka ay ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, ku waas oo dhaq dhaqaaqyo xoogan ka wada Gobollada Gedo, Hiiraan, Baay iyo Bakool.
Sanad kasta ayaa waxaa badal lagu sam eeyaa askarta M/Afrika ee xiran koofida cag aaran ee muujineysa inay u diiwaangashan
yihiin howl-galka AMISOM Soomaaliya.
Bannaanbixii Shalay ka dhacay Muqdi sho iyo Duqa Muqdisho
Bannaanbax ballaaran oo lagu taageerayay Metelaadda G/Banaadir ee Aqalka Sare ee Ba arlamaanka Somaliya ayaa Shalay lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Bannaanbaxa oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka G/Banaadir ayaa waxaa ka qaybgalay Gudoomiyaha G/ Banaadr ahna Du qaMuqdsho, Kuxig eenad iisa, Xildhiba ano iyo qaybaha kale ee bul shada.
Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish), Gudoomiya ha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho oo boqolaal qof kula had layay Taalada Daljrka Dahsoon ayaa Xildhiba anada Golaha Shacabka kaga mahadceliyay ansixintooda Metelaadda G/Ba naadir.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in Magaala da Muqdisho ay tahay hooyadii magaalooyinka kale ee dalka iyo Caasimaddii Shanta Sooma aliyeedba.
"Magaalada Muqdisho waa hooyada Mag aalooyinka Somaliya oo dhan, waa Magaalada Dadka Soomaaliyeed oo dhan, waana ho oyada Calanka Soomaaliyeed, waa meesha ke liya ee shanta Soomaaliyeed aysan ku daree min in laga leeyahay oo ay ku dareemaan in ay iyagu leeyihiin taas ayaa mudan in lagu qii meeyo Muqdisho.” Ayuu yiri Duqa Muqdisho.
142 Xildhibaan ayaa Dorraad haa ugu cocdey say Xeerka Metelaadda Gobolka Banaadir, wa xaa diiday 4 Xildhibaan, mana jriin cid ka aam ustay, sida uu ku dhawaaqay Gudoomiya ha G/Shacabka ee Baarlamaanka Somali ya, Max amed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Xisbiga Sahan ee Guuleed oo caddieyey mowqifkiisa doorashooyinka 2020/21
Xisbiga Sahan ee uu hoggaamiyo Cabdika riim Xuseen Guuleed ayaa qoraal uu soo saar ay ku caddeeyey mowqifkiisa ku aadan qaba shada doorashooyinka 2020/2021. Hoos ka aqriso qoraalka xisbiga.
Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo mooshin u gudbinaya guddoomiye Mursal.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in xildhib aanno ka tirsan golaha shacabka ee baarlama anka soomaaliya ay wadaan mooshin ku aadd an in golaha shacabka lagu soo darro 30 xildh ibaan kuwaasi la siinayo sida ay tilmaameen beelaha kuraasta aan ku laheyn labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya.
Mooshinkaan ayaa lagu wadaa in guddoon ka loo gudbiyo kulanka maanta, islamarkaana kulanka lagu soo daro haddii uu fasaxo guddo onka golaha shacabka.
Wararka ayaa intaa ku daraya in xildhibaan nada mooshinka wada ay yihiin kuwii kasoo ho rjeeday in aqalka sare laga siiyo 13 senator gobolka benaadir.
Xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka oo kol hore warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sharci darro tahay in kuraasta aqalka sare la ga siiyay gobolka benaadir loo qeybin doono beela gaar ah, islamarkaana lagu dulmin doo no beelaha kale, arrintane ay tahay mid ka bax san caddaaladda.
Kulanka maanta ee golaha shacabka ayaa looga doodi doonaa ajandayaasha kala ah he shiis soomaaliya iyo turkiga ay gaareen iyo xeerka asteenta kuraasta golaha shacabka.
Shabaab oo weeraray Xerada Ciidanka Jabuuti ee Magaalada Beledweyne
Xoogaga Ururka Al Shabaab ayaa saqdii dhexe ee xalay weerar madaafiic loo adeegs aday ku ekeeyay Xerada Ciidanka Militariga Jabuuti ku leeyihiin Magaalada Beledweyne.
Shabaabka ayaa bartilmaameedsaday Xer ada Ciidanka Jabuuti ee ku taala xaafadda Ha wlwadaag, waxayna weerarkan soo qaadeen, xilli inta badan dadka deegaanka ay hurdeen.
Ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah Amisom ayaa sidoo kale madaafiic culus kaga jawaab ay weerarkaas, iyagoona garaacay dhankii madaafiicda looga soo tuuray. Wararka ayaa sheegaya in dadka reer Beledweyne ay hurda da kaga soo baraarugeen madaafiicdii xoogan eyd, ee ay labada dhinac saqdii dhexe ee xa lay is weydaarsanayeen.
Dadka deegaanka ayaa sheegay inaanay ka la cadayn karin in madaafiicdaasi ay khasaaro gaysteen iyo in kale, balse Illaa iyo hadda inta laga warqabo aysan jirin cid ku waxyeelooday madaafiicdaasi.
Maamulka G/Hiiraan iyo Saraakiisha Ciidan ka Jabuuti ayaan ka hadlin weerarka madaafiic da loo adeegsaday ee lala beegsaday xerado oda.
Mintidiinta Ururka Al Shabaab ayaa barta mihii bishan weerarkan mid lamid ah ku qaad ay Xerada Ciidanka Militariga Jabuuti ku leeyih iin xaafadda Hawlwadaag.
Xisbiga Sahan markuu u kuurgalay hadal je edintii GMDQ ee kulankii golaha Shacabka ta arikhdu markay ahayd 27 Bisha June 2020 , Warbixinta Guddiga waxa lagu sheegay in aa nay doorasho qof iyo cod ah ku qabsoomi Ka rin muddo xileedka u hartay da wladda talada haysa. Iyagoo dha nka kale gudigu si dorasho qof iyo cod ah loo qabto uu guddigu soo gudbiyay 2 hab oo lagu diiwaangalin karo codbixiyayaasha doorashadana ay ku qabso omi karto kuwaas oo kala ah :
Doorasho ku dhacda habka diiwaan gelinta electronica ee loo yaqaan (biometric) oo leh ka yd iyo kalsooni , taas oo ku dhici karta muddo 13 bilood gudahood laga bilaabo bisha July 2020 illaa bisha August 2021. Doorasho ku dhacda habka diiwaangelinta ga canta (manual voter registration) oo aan laha yn kayd iyo kalsooni midna taas oo ku qabso omi karta ilaa bisha July 2020 ilaa March 2021.
Khilaafka hareeyay G/Shacabka &Aqalka Sare ee ku aaddan hab raacyada sharciyeed &midka wadahadal ee loo abaaro doorashada Qaran ee loo madlanyahay.
Ilaa hadda GMDQ waxa uu warbixintiisa u gu dbiyay oo hortegay G/shacabka kaliya , walina ma hortegin aqalka sare sida ku cad fariinta qo dobka 53 aad ee doorashooyinka wuxuu ku fa rayaa guddiga inuu warbixintiisa ka horjeediyo 2da aqal ee baarlamanka si wada jir ah. Soo je edinta waqtiga kooban qaadaneysa ee qaba shada doorasho ku dhisan habka diiwaan gel inta gacanta ee codbixiyaha oo ilaa bisha Ma rch ee sanadka 2021 ku qabsoomi karta ma aha mid maangal ah oo waa hab aan la aamini Karin,laguna kalsoonaan karin hufnaanta natiij ada doorashada iyo cod bixinta intaba.
Hubaal la’aanta ka jirta in doorasho xor ah oo xalaal ah lagu qaban karo muddo 13 bilood ah ee soo jeedinta 2aad, marka la eego caqabad aha farsamo, Qalab, dhaqaale, siyaasadeed & amni ee ku xeeran hawlaha qabashada doora sho qof iyo cod ah.
Khilaafka & is af-garashawaaga siyaasadeed ee u dhexeeya DFS& D/goboleedyada oo aan wali xalismin.
Saamileyda siyaasadeed ee dalka oo ilaa ha atan ku qanacsaneyn hanaan ay u socdaan ari maha doorashooyin, wax talo ahna aan ku lah eyn.